20-ka tababare iyo Kabtannada Kooxaha Ingiriiska Oo Shir XAASAASI Ah Maanta La Yeelanaya Premier League, Khubaro Caafimaad Oo Shirka Joogta & Waxa Laga Hadlayo - Gool24.Net
20-ka tababare iyo Kabtannada Kooxaha Ingiriiska Oo Shir XAASAASI Ah Maanta La Yeelanaya Premier League, Khubaro Caafimaad Oo Shirka Joogta & Waxa Laga Hadlayo
Maamulka Premier League ayaa maanta kulan la yeelanaya tababareyaasha iyo kabtannada kooxaha horyaalka Premier League, waxaana ku wehelin doona oo kala qayb-gelaya khubaro dhinaca caafimaadka ah.
20ka tababare ayaa ka qayb-geli doona shirkii ugu horreeyey ee noociisa ah ee maamulka Premier League ay qabtaan, waxaana markan loogu baahday inay fikirkooda ka dhiibtaan mashruuca dibu-bilaabista horyaalka.
Shirkan ayaa waxa kale oo kasoo qayb-geli doona wakiillo metelaya Ururka ciyaartoyda kubadda cagta ee magaciisa loosoo gaabiyo PFA iyo Ururka Tababareyaasha Horyaalka ee LMA, kuwaas oo ay qayb muhiim ah ku leh go’aamada ay qaadanayaan ciyaartoyda iyo tababareyaashu.
Kulankan oo khadka maqal iyo muuqaalka lagaga qayb gelayo ayaa waxa kale oo ku lug yeelanaya daneeyeyaasha kubadda cagta Ingiriiska, laakiin dawladda UK ayaan wax shaqo ah ku lahayn shirka maanta oo maalinta berri ee Khamiista ah kulan kale kula ballansan.
Tababareyaasha, kabtannada iyo ururrada ka qayb-gelaya shirka ayaa loo jeedin doonaa nidaamka caafimaadka lagu ilaalinayo badqabka ciyaartoyda iyo shaqaalaha kooxda marka uu horyaalku dib u bilaabmo, waxaana duruustaas bixinaya Mark Gillett oo ah Sarkaalka sare ee caafimaadka u qaabilsan Premier League.
Tababareyaasha ayaa waxay xiisaynayaan inay wax badan ka ogaadaan sida ciyaartoyda baadhitaan loogu samaynayo, loolana soconayo kuwooda laga helay fayraska iyo waliba waxa dhacaya haddii mid ama ka badan oo ciyaartooyo ah uu xanuunku ku dhaco iyaga oo tababarka ku sugan ama horyaalka dib loo bilaabay.
Waxa jira walaac weyn oo badqabka caafimaadka la xidhiidha oo ciyaartoyda, tababareyaasha iyo shaqaaluhuba muujinayaan, waxaana la sheegayaa in koox kasta ay joogaan laacibiin badan oo si cad u diiddan inay tababarka kusoo laabtaan iska daa in ciyaar caadi ah oo la is-jiidh-jiidanayo ay ka qayb-galaan e.
Horyaalka Premier League ayaa la filayaa in dib loo bilaabo horraanta bisha June ee foodda inagu soo haysa, waxaana haddaba tababarka bilaabay kooxaha qaarkood.
Si kastaba, waxa horyaalka Premier League iyo kuwa kale ee aan la kansalin ba tusaale ah horyaalka waddanka Jarmalka ee Bundesliga oo Sabtida soo socota dib u bilaabmaya, kaas oo dhiirigelin u noqon doona ciyaartoyda iyo maamuleyaasha si ay iyaguna ugu soo laabtaan.